‘आइसीटी नीति कार्यान्वयन नहुँदा विकासले गति लिन सकेन’
धुलिखेल । दुई वर्ष अगाडि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरेर सूचना तथा सञ्चार र प्रविधि ९आइसिटी० मन्त्रालय राखियो । तर नाम परिवर्तन भएको बीस दिन बित्न नपाउँदै पुनः..
नेपालमा इन्टरनेट किन महंगो छ? यस्तो छ सेवा प्रदायकको उत्तर
धुलीखेल । नेपालमा कुनै पनि प्रकारको इन्टरनेट सेवा महंगो भएको सबैको गुनासो रहन्छ। तर यसको कारण के हो तरु सेवा प्रदायकहरुले भने नेपालमा इन्टरनेट महँगो हुनुको मुख्य कारण इन्टरनेटको स्थानीयकरण..
एनसेलले स्वर परिवर्तन गरी फोनमा कुरा गर्न मिल्ने सुविधा ल्यायो
काठमाडौं । एनसेलका सबै प्रिपेड तथा पोस्टपेड ग्राहकले एक नयाँ रोचक भ्यालु एडेड सर्भिसको मजा लिन सक्ने एनसेलले जनाएको छ । एनसेलले आफ्ना ग्राहकका लागि ‘म्याजिक भ्वाइस’ सेवा ल्याएको छ, जस..
काठमाडौं । नेपाल भित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पैसा पठाउन मनि ट्रान्सफरका शाखा खोज्दै हिड्नुपर्ने बाध्यता अब नरहने भएको छ। मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वदेशभित्र अनलाईन मनि ट्रान्सफल गर्न पाउने..
काठमाडौं । जिएसएम मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले ९०० मेगाहर्ज र १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा प्रविधि तटस्थता अवलम्बन गर्दैछ । थ्रिजी प्रविधिमा आधारित मोबाइल सेवाको विस्तार दोब्बर गरी देशको कुल जनसंख्याको ६०..
एनसेलले पायो फोरजी सेवा अनुमति
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले चौथो पुस्ताको प्रविधि (फोरजी) संचालनको अनुमति पाएको छ। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले बुधबार एनसेललाई फोरजी संचालन गर्न अनुमति दिएको हो। एनसेलले..
ताप्लेजुङ। ताप्लेजुङको सिरिजङ्घा गाउँपालिका–७ स्थित खेवाङमा जिएसएम टावर सञ्चालनमा आएको छ । यसअघि (मोबाइल फोन) सञ्चारको पहुँचमा नरहेको सो क्षेत्रमा हालै टावर निर्माण सम्पन्न भएसँगै जिएसएम (टुजी) सेवा सुरु भएको..
नेपाल टेलिकमद्वारा डाटामा ल्यायो सस्तो अफर
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले पनि इन्टरनेट डाटा शुल्क घटाएको छ । सस्तो अफर भन्दै टेलिकमले आफ्नो शुल्क घटाएको हो । कम्पनीले नाइट टाइम प्याक, अल टाइम प्याक, डे नाइट डाटा प्याक,..
एनसेलले ल्यायो नयाँ डेटा प्याक
काठमाडौं । जिएसएम मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले ‘इन्टरनेट सबैका लागि’ भन्ने थिमअन्तर्गत नयाँ डेटा प्याकहरु ल्याएको छ । यसअन्तर्गत एनसेलका सबै ग्राहकहरुले अब अझै बढी डेटा भोलुमका साथ विभिन्न..
सामसङ ग्यालेक्सी एट र ग्यालेक्सी एट प्लस स्मार्टफोन नेपाली बजारमा
काठमाडौं । कोरियाको सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सले ग्यालेक्सी एस एट र ग्यालेक्सी एट प्लस स्मार्टफोन नेपाली बजारमा ल्याएको छ । दुवै स्मार्टफोन असीमित सम्भावना, नयाँ डिजाइन, विशेषता र प्रयोगकर्तामैत्री भएको कम्पनीले जानकारी..
वर्ल्डलिंकको १०० जीबीपीएसको नेटवर्क विस्तार
काठमाडौं । वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनस प्राइभेट लिमिटेडले सन् २०२० सम्म नेपालका दशलाख घरमा विश्वस्तरीय ‘फाइवर टु द होम (एफटीटीएच) नेटवर्क सेवाको विस्तार गर्ने योजना लिएको छ । कम्पनीले नेपालका मुख्य शहर, शहरोन्मुख..
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले नयाँ वर्षका लागि रिचार्ज, डाटा र नाइट भ्वाइसमा अफर ल्याएको छ। नयाँ योजनामा रिचार्जमा १५ प्रतिशतसम्म बोनस, साढे चार पैसासम्ममा एक एमबि डाटा र २५ रुपैयाँमा..
​नेपाल टेलिकमले ल्यायो लोन सुविधा
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले जीएसएम तथा सिडिएमए प्रिपेड सेवाका सेवाग्राहीहरुलाई ब्यालेन्स नहुँदा पनि कल गर्न लोन रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । यस सम्बन्धमा नेपाल टेलिकम र हंकङ्गस्थित टेक्साको लोकल एजेन्ट..
​आजबाट एनसेलका सबै ग्राहकले विश्वका ३० देशमा लोकल कलको दरमा फोन पाउने
काठमाडौं । एनसेलका सबै ग्राहकले अब लोकल कलको दरमा नै विश्वका विभिन्न ३० मुलुकहरुमा कुरा गर्न सक्नेछन् । देशकै अग्रणी जिएसएम मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले यही सोमबार चैत्र १४..
​३३ अर्ब पूँजीगत लाभकर नतिर्ने एनसेलको सेवा बहिष्कार अभियान माईतिघरबाट शुरु
काठमाडौं । नेपाल सरकारलाई ३३ अर्ब पूँजीगत लाभकर नतिरेको एनसेलका सेवाहरु बहिष्कार गर्न युवा बिद्यार्थीहरुले अभियान सुरु गरेका छन् । युवा बिद्यार्थीहरुको एक समूहले चैत्र २ गते राजधानीको माईतीघरमा ब्यानरसहित बिरोध..
नेपाल टेलिकमको होली अफरःरिचार्जमा डेटा बोनस, सस्तो यूट्युब् र एसएमएस प्याक
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले होली पर्वका अवसरमा आफ्ना ग्राहकलाई बिभिन्न सेवाहरुमा सहुलियत दिने भएको छ। कम्पनीको चाडपर्व अफर अन्तर्गत जीएसएम र सिडिएमए पोष्टपेड तथा प्रिपेडका सेवाग्राहीलाई रिचार्ज कार्डमा डेटा बोनस, यूट्युब्..
​नचिनेका नम्बरबाट आएको फोन पत्ता लगाउने नेपाली एप, कसरी गर्ने डाउनलोड ?
काठमाडौं । तपाईको मोवाइलमा सेभ नभएको वा नचिनेको नम्बरबाट फोन आउँछ ? यदि यसरी अपरिचित नम्बरबाट फोन आउने गरेको छ भने यसको समाधान हुने भएको छ । अब अपरिचित नम्बरबाट आएको..
​नारी दिवसको अवसरमा नेपाल टेलिकमको सहुलियत सेवा
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा उपभोक्ताहरुलाई बिभिन्न किसिमका सेवाहरुमा सहुलियतमा प्रदान गर्ने भएको छ । कम्पनीको ‘प्रमोसनल अफर’ अन्तर्गत उक्त सेवाहरु उपलब्ध गराएको जनाएको हो । अफर बुधबारदेखि..
​मोबाइल मर्मत गरेरै मासिक ५० हजार आम्दानी
काभ्रे । उग्रचण्डी नाला गाविस–२ कोइपाटोलका महेश श्रेष्ठले मोबाइल, टेलिभिजन, रेडियो, घडीलगायत सामग्री मर्मत गरेर मासिक ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएका छन् । इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ विषय पढेका श्रेष्ठले आफूले पढेको..
शिवरात्रीको अवसरमा नेपाल टेलिकमको १०० मा १०० नै फ्रि अफर
काठमाडौं। नेपाल टेलिकमले शिवरात्रीको अवसरका टेलिकमका ग्राहकलाई नयाँ डेटा अफर ल्याएको छ। डेटा धेरै प्रयोग गर्ने फोरजीका ग्राहकलाई लक्षित गर्दै टेलिकमले योजना सार्वजनिक गरेको हो। टेलिकमले अफरमा डेटा बन्डल प्याकेज अन्तर्गत..
नेपाल टेलिकमले ८ अर्ब रुपैयाँ लाभांश बितरण गर्ने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले सेयरधनीलाई ५१ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । टेलिकमको हाल बसेको सञ्चालक समिति ७०७ औं बैठकले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई नगद लाभांश दिने प्रस्ताव..
नेपाल टेलिकमले ल्यायो भ्यालेन्टाइन अफर २५ रुपैयाँमा २५० मिनेट कल
काठमाडौं। नेपाल टेलिकमले प्रणय दिवस (भ्यालेन्टाइन डे)का अवसरमा जीएसएम सेवाका ग्राहकका लागि नयाँ अफर ल्याएको छ। टेलिकमले २५ रुपैयाँमा दुईसय ५० मिनेटको टक टाइम भएको 'नाइट भ्वाइस प्याकेज अफर' ल्याएको हो।..
काठमाडौं । एनसेलले फेसबुक चलाउन निशुल्क गरेको छ। फेसबुकसँगको सहकार्यमा मंगलबार राति १२ बजेदेखि निशुल्क व्यवस्थालाई लागू गरिने एनसेलले जनाएको छ। फेसबुकबाट फोटो अपलोड गर्न, स्टाटस राख्न तथा लाइकमा निशुल्क गरिने..
नेपाल टेलिकमले ६ महिना मै नाफा कमायो झण्डै ८ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को नाफा बढेको छ । चालु आवको पुससम्ममा कम्पनीले ७ अर्ब ९१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको..
टेलिकमको फोरजी आइफोनमा चल्न थाल्यो, जापान र कोरियाबाट ल्याएकामा भने नचल्ने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको फोरजी आइफोनमा चल्ने भएको छ। यसअघि आफोनले टेलिकमको लोकेशन कोड इनेबल नगरेकोले केही फोनहरुमा चलेको थिएन। आजदेखि टेलिकमको कफोरजी आइफोनका फोरजी चल्ने सबै संस्करणहरुमा फोरजी चल्ने..
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा काठमाडौंमा आफ्ना सेवाहरुको सबैभन्दा बढी कारोबार गर्ने बिक्रेताहरु र बढी बिल भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई सम्मान गरेको छ। काठमाडौं क्षेत्रीय निर्देशनालयका निर्देशक श्यामप्रसाद शुक्ला..
भोलिबाट प्रिपेड मोबाइलमा फोर-जी, छुट सुविधा पनि
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले भोलि शनिबारदेखि जीएसएम प्रिपेड ग्राहकलाई पनि फोर-जी सेवा दिने भएको छ । पोष्टपेडमा फोर(जी दर्ता गर्ने ग्राहकको संख्या बढ्दै गर्दा टेलिकमले फोर-जी सेवा दिन लागेको हो..
तेहृौँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा टेलिकमद्धारा अस्पताललाई सहयोग
काठमाडौं। नेपाल टेलिकमले आफ्नो तेहृौँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा विभिन्न अस्पतालहरुलाई सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । कम्पनीले काभ्रेको साँगास्थित स्पाइनल इन्जुरी पुनस्र्थापना केन्द्रलाई १५ वटा विशेष सुविधायुक्त ह्विलचियर उपलब्ध गराएको छ । त्यसैगरी..
​मोबाइल एक्पोमा फोरजी स्मार्टफोनमा ग्राहकको भीड बढ्दो
ललितपुर । माघ १४ गतेदेखि ललितपुर मलमा शुरू भएको मोबाइल एक्पो २०१७ मा फोरजी स्मार्टफोनहरु विशेष मूल्यमा बिक्री भइरहेका छन् । पोष्टपेड र प्रिपेड दुवै मोबाइलमा सञ्चालन हुन लागेको फोरजी..
एनसेलको नयाँ एसएमएस प्याकबाट अब ३ पैसामा एसएमएस
काठमाडौं । मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले ‘नयाँ एसएमएस प्याक’ नामक आकर्षक योजना ल्याएको छ। यस अन्तर्गत सबै प्रिपेड तथा पोस्टपेड ग्राहकले अब एनसेल नेटवर्क भित्र अझ सुलभ दरमा एसएमएस..
Results 402: You are at page 8 of 14